သီချင်းဆိုပါ……………. - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » သီချင်းဆိုပါ…………….
စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးက သီချင်းဆိုရတာ ကြိုက်သူလား………….. သီချင်း နားထောင်ရတာကို လူတော်တော်များများ ကြိုက်ကြပေမယ့် သီချင်းဆိုတာကို သဘောကျသူကတော့ သိပ်မများလှပါဘူး။ သီချင်းဆိုတာက အသံနာစေတယ် ဘာမှ အကျိုးမထူးဘူးလို့ ယူဆနေတယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ကြည့်နော်။
ဖုန်းကနေဖြစ်ဖြစ် ကားမောင်းရင်း သီချင်းဖွင့်ပြီးဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာမှာ သီချင်းဖွင့်ရင်း သီချင်းလိုက်ညည်းတတ်တယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးလောက်မယ့် အတွေ့အကြုံလေးတွေကနေ အရင်စပြောလိုက်ရအောင်လား.. သီချင်းဆိုတဲ့အခါ
• စိတ်လက်ပေါ့ပါး သွားတယ်
• စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့သွားတယ်
• စိုးရိမ်မှုကို သက်သာစေတယ်
• ဟန်ပန်လုပ်ရင်း သီဆိုတာကြောင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဖြစ်တယ် ဆိုရင် ဘာပြောမလဲ။ရေချိုးရင်း ရေချိုးခန်းထဲမှာ သီချင်း အော်ဆိုတတ်သူတိုင်း ဒီခံစားမှုလေးတွေကို သိမှာပါ။
ဒီလိုဆိုတတ်သူတွေရရှိမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေများလဲ……
သီချင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စိတ်ခံစားမှုကောင်းတာပြီး အောက်ဆီတိုစင် ဟော်မုန်းတွေထွက်လာပါတယ်။ ဒီလို ထွက်ရှိမှုက စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးနေရင် သီချင်းအော်ဆိုရင်း ဖွင့်ထုတ်ချလိုက်ပါ။ စိတ်သက်သာသွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ သီချင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ ဟော်မုန်းတွေက နာကျင်မှုကို သက်သာစေပြီး စိတ်လက်လန်းဆန်းအောင် လုပ်ဆောင် ပေးလို့ပါ။
သီချင်းဆိုတတ်တဲ့အကျင့် ရှိသူတွေဟာ အခြားသူတွေထက် သိမြင်မှုစွမ်းရည် ပိုကောင်းကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သီချင်းဆိုတာက ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ သီချင်းဆိုတာက အတွေးရှင်းအောင် လည်း ကူညီပေးပါသေးတယ်။
သီချင်းဆိုတာက စိတ်ကျန်းမာစေနိုင်သလို နှလုံးကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ရှည်စေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါသတဲ့။
သီချင်းဆိုတာက စိတ်လက်ပေါ့ပါးစေနိုင်တာကြောင့် သွေးတိုးကျစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်သလို သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးရှိရင် သီချင်းဆိုပေးသင့်ပါတယ်။
လူတော်တော်များများ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြပေမယ့် မျက်နှာကြွက်သားတွေကိုတော့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မိကြပါဘူး။ ဒီတော့ မျက်နှာကြွက်သားလေးတွေ သန်မာစေဖို့ဆိုရင် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုက သီချင်းဆိုတာပါ။
ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး သီချင်းဆိုတာက ရင်ဝမ်းခြားမြှေးကိုလည်း ကျန်းမာစေပါသေးတယ်။
သီချင်းဆိုတာက အသံနေအသံထားနဲ့ဆိုလေလေ အဆုတ်ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးလေလေ ဖြစ်ပြီး အဆုတ်ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆုတ် ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဖြစ်ရင်တောင် သီချင်းဆိုပါ။
သီချင်းဆိုဖို့ဆိုတာက သီချင်းစာသားတွေကို အရင်မှတ်ရတာပါ။ ဒီလိုမှတ်မိအောင်လုပ်တာက ဦးနှောက်ကို မှတ်မိနိုင်စွမ်း ကောင်းအောင် အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးတာပါပဲ။ ဒီတော့ မှတ်မိနိုင်စွမ်းကောင်းအောင် လေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုရင် သီချင်းဆိုပါ လို့ အကြံပြုပါရစေ။
သီချင်းဆိုတာက သွေးပေါင်ကို ထိန်းညှိပေးတယ်။ ကိုယ်တွင်းက ကော်တီစောဟော်မုန်းတွေကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလျော့ကျစေတယ်။ ဒါတွေက ကိုယ်ခံအားအတွက် အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့တွေပါပဲ။
ဒီတော့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ သီချင်းလေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ညည်းလိုက်ရအောင်လား…………………
မမွေးဖွားမီ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ကို မြှင့်တင်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျှော့ချခြင်း
21 Incredible Benefits of Singing That Will Impress You https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/21-incredible-benefits-singing-that-will-impress-you.html Accessed Date 25 March 2020
11 Amazing Benefits Of Singing You May Not Know https://www.lifehack.org/288228/11-amazing-benefits-singing-you-may-not-know Accessed Date 25 March 2020
11 Surprising Health Benefits of Singing https://takelessons.com/live/singing/health-benefits-of-singing Accessed Date 25 March 2020
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နို့တိုက်မေမေတိုင်း သိထားဖို့လိုမယ့် အချက်တွေက ဘာတွေများလဲ……..
မသိလိုက်ဘဲ လုပ်မိနေတဲ့ ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတွေ